आधुनिक अध्यापन मा सक्रिय दुई अवधारणाहरु लागू - "। व्यक्तिगत सिक्ने बाटो" "व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory" र यी विभाग निजी र सामान्य रूपमा मानिन्छ। , एक व्यक्ति शैक्षिक trajectory को यात्रा मा निर्दिष्ट गरिएको छ बस राखे। उत्तरार्द्ध, बारी मा, अधिक व्यापक रूप थप शिक्षा प्रणालीमा प्रयोग गरिएको छ। मार्ग शैक्षणिक संस्था मा व्यक्तित्व-विकास वातावरण को सफल कार्यका लागि एक महत्वपूर्ण घटक हुन मानिन्छ। व्यक्तिगत व्यक्तिगत trajectory शैक्षिक प्रक्रिया मा विद्यार्थीको क्षमता साकार हो। हामीलाई थप विवरण मा विचार गरौं।
को मनोवैज्ञानिक र शैक्षणिक प्रकाशनहरू को विश्लेषण रूपमा, व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory को संगठनमा विज्ञान र अभ्यास महत्वपूर्ण छ। यसलाई निम्न क्षेत्रहरु समेट्छ:
अर्थपूर्ण - शिक्षा कार्यक्रम मार्फत।
Dejatelnostno - नवीन शिक्षा प्रविधी मार्फत।
प्रक्रिया - संचार को प्रकार, संगठनात्मक पक्ष निर्धारण गर्छ।
विकास को व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory आफ्नै सिक्ने लक्ष्य को बोध उद्देश्य गतिविधिहरु को एक विशेष अनुक्रम घटक रूपमा देख्न सकिन्छ। यस मामला मा, यो क्षमताहरु, क्षमता, प्रेरणा, मानव चासो अनुरूप गर्नुपर्छ। यी गतिविधिहरु को, समन्वय सल्लाह र आमाबाबुले संग सहयोग मा शिक्षकहरू समर्थन, जब आयोजना।
यो जानकारी सारांश, तपाईं प्रश्न मा श्रेणी को परिभाषा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत शैक्षिक प्रक्षेप पथ, गतिविधिको शैली को manifestations छन् र प्रेरणा, सिक्न र शिक्षक संग सहयोग लागू गर्न सक्ने क्षमता आधारमा। संरचनात्मक तत्व यस्तो शैक्षणिक कार्यक्रम रूपमा एक शब्द को श्रेणी लिङ्क। तिनीहरूले विद्यार्थीहरूको शिक्षा विशिष्ट स्तर मास्टर गर्न अनुमति दिन्छ।
शैक्षिक कार्यक्रम रूपमा मानिन्छ:
सिद्धान्त अभिमुखीकरण व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रक्रियाको महसुस गर्न अनुमति ज्ञान। उहाँले विभिन्न आवश्यकता र अवसर शैक्षिक स्तर लागि प्रदान संग विद्यार्थीहरूको उपलब्धि सुनिश्चित लागि अवस्थाको निर्धारण द्वारा शुरू गरिएको छ।
व्यक्तिगत बाटो व्यक्तिगत विशेषताहरु आधारित सिर्जित। विशिष्ट कार्यक्रम एक व्यक्ति trajectory यसको प्रमुख विशेषताहरु रूपमा सेवा गर्दैछन् रूपमा। यो व्याख्या तपाईं अवस्थामा मानक हासिल गर्न कसरी कहाँ बोध एक तरिका को विकल्प छोराछोरीको व्यक्तिगत विशेषताहरु निर्भर को मोडेल एक प्रकारको सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
व्यापक मामलामा, कार्यक्रम निजीकरण र भिन्नता को विचार कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। को शैक्षणिक प्रक्रियामा पहिलो मामला मा सबै प्रकारका र शिक्षण विधि मा छोराछोरीको व्यक्तिगत विशेषताहरु खातामा लाग्छ। भिन्नता केही सुविधाहरू को आवंटन मा आधारित विद्यार्थी समूहन समावेश छ। यो दृष्टिकोण मा, व्यक्तिगत बाटो नक्कली कार्यक्रम केन्द्रित छ। यसलाई स्थापित स्तर को अनिवार्य उपलब्धि संग आत्म-अभिव्यक्ति लागि आवश्यक अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य छ।
एक बच्चा एक व्यक्ति शैक्षिक trajectory गठन गर्ने, यो psycho-शैक्षणिक र विषय ज्ञान लागू र विशिष्ट उद्देश्य परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यस प्रक्रियामा, त्यहाँ धेरै सिद्धान्तहरू छन्।
पहिलो छुटकारा ज्ञान हासिल गर्न, मानिसको स्पष्ट स्थिति हुनेछ जसमा यस्तो कार्यक्रम सिर्जना गर्न, आवश्यकता छ। यसलाई विशेष, खाता मा आफ्नो क्षमता ले कुन व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory को निर्माण, सुरु गर्नुपर्छ पनि संज्ञानात्मक प्रक्रिया, को आफ्नो कमजोरी।
दोस्रो सिद्धान्त मानव क्षमताहरु अग्रिम गर्न पर्यावरण अवस्था बताउन आवश्यकता implies। यो सिद्धान्त स्थिर Defining कार्यहरू, आधुनिक अवस्था र शिक्षा को विकास को संभावनाहरु गर्न पर्याप्त मा व्यक्त गरिएको छ। यो सिद्धान्त बेवास्ता सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रियाको निष्ठाको विनाश प्रकुपित सक्छ। यसबाहेक, यो सिस्टम को हानि वा व्यक्तित्व वा संज्ञानात्मक गतिविधि मान योगदान हुन सक्छ।
तेस्रो मौलिक स्थिति मानव प्रविधि, जो संग व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory निर्माण गर्न लगातार कार्यान्वयन गरिनेछ को स्टक लिन आवश्यकता झल्काउँछ।
व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory सिक्ने जीवन र ज्ञान को तरिका mastering एकै समयमा निर्माण गरिएको छ। यो प्रक्रिया सचेत कण्ठ को स्तर मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिरबाट यो सामाग्री को मूल र सही प्रजनन नजिक मा नै प्रकट। Assimilation ज्ञान र एक नमूना को जीवन को वा यस्तै अवस्थामा तरिका को आवेदन को स्तर मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, प्रयोग र प्रक्रिया रचनात्मक दृष्टिकोण।
अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory सफलतापूर्वक केही अवस्थामा सबै संज्ञानात्मक क्षेत्रमा पूरा गर्न सकिँदैन भनेर देखाउँछ। विशेष तिनीहरूले सक्षम हुनुपर्छ:
अध्ययन विषयहरू को अर्थ निर्धारण गर्न।
यो एक विशिष्ट मोड्युल, पाठ्यक्रम, खण्ड, विषय को विकास को समयमा आफ्नो लक्ष्य राख्दै छ।
अनुसार प्रशिक्षण को स्तर संग इष्टतम गति र शिक्षा को प्रकारका चयन गर्नुहोस्।
थाह व्यक्तिगत विशेषताहरु कि अधिकतम पत्राचार ती तरिकाहरू प्रयोग गर्न।
गठन competencies र यति मा को रूप मा प्राप्त परिणाम महसुस।
अनुसार संज्ञानात्मक गतिविधि तमाम प्रगति को विशेष संग मूल्यांकन र काम को समायोजन प्रदर्शन।
एक विद्यार्थीलाई को व्यक्तिगत शैक्षिक प्रक्षेप पथ को गठन गरिएको छ को जो रूपरेखा मा, प्रक्रिया प्रमुख सुविधा, प्राथमिक भूमिका कारण जो एक व्यक्ति नयाँ शैक्षिक उत्पादनहरु सिर्जना, आफ्नो क्षमता दिइएको छ। यो काम निम्न विचार मा आधारित छ:
जो कोहीले, फेला पार्न तैयार र निर्णय एउटा तरिका वा अर्को, ज्ञान को Assimilation यसको प्रक्रिया सम्बन्धित didactic समस्या सहित यसको आफ्नै संस्करण प्रस्तावित सक्षम छ।
व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory मात्र माथि उल्लेख अवसर प्रदान मा traversed गर्न सकिन्छ।
मानिस यो समस्या समाधान गर्न अवस्थाको आफ्नै संस्करणको लागि खोज मा राखिएको छ। एकै समयमा उहाँले आफ्नो रचनात्मक क्षमता लागू हुन्छ।
सारांश मा, हामी निम्न निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory एक रचनात्मक दृष्टिकोण प्रयोग गठन गरिएको छ। यसको सिर्जना समारोह अनुरूप ढाँचाको प्रक्रिया यो जडान, मा।
तिनीहरूले एक अद्वितीय दृश्य म्याट्रिक्स संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो। वर्तमान समयमा, विशेष गरी दूरी mastering ज्ञान नेविगेटर को सुधार मा आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गरेका छन्। तिनीहरूलाई बिना व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory कल्पनासमेत नगरेको हो। प्रतीक, वर्ण मार्फत matrices, संक्षिप्तरूपहरूप्रयोगगर्नुहोस् संज्ञानात्मक उत्पादन व्यक्ति चढाई स्तर उल्लेख गरे। बस राख्नु, को नेभिगेटर एक दृश्य र एक विस्तृत नक्सा छ। यो विद्यार्थी आफ्नो स्थिति, साथै निकट भविष्यमा तिनीहरूलाई सामना गर्ने चुनौती पहिचान गर्न सजिलो छ। म्याट्रिक्स तपाईं चार-लिंक सिस्टम को निर्देशांक निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ "हुनेछ अध्ययन - - - अध्ययन थाहा छ। नयाँ थाहा" यो प्रक्रिया सत्य गर्न चढाई एक कुंडलित बाटो प्रतिनिधित्व छ। म्याट्रिक्स घटक - एक प्रक्षेपण, ठेगाना, नाम, पानामा को विमान लागि निर्देशनहरू। काम अनुशासन, विषय, एकाइ, पाठ्यक्रम, ज्ञान, सीप, एक सदिश प्रतिनिधित्व पेशों को अधिग्रहण mastering उद्देश्य सिक्ने। यो क्रियाकलाप सामग्री रेकर्ड।
व्यक्तिगत शैक्षिक trajectory ज्ञान आवश्यक स्वतन्त्रता आन्दोलनहरु चरणबद्ध-निजी र obschepredmetnyh समस्या र विशेषता को अधिग्रहण सम्बन्धित चुनौतीहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। उत्पादक गतिविधि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत विशेषताहरु अनुसार बाहिर छ। सबै फरक सिकाउन - शिक्षक हेर्न र प्रत्येक प्रशिक्षार्थी एक अद्वितीय व्यक्तित्व विकास गर्न चाहने एक कठिन कार्य समाधान हुनेछ।
यस सन्दर्भमा, एक व्यक्ति trajectory प्रक्रिया सबै सहभागीहरू बीच अन्तरक्रिया को एक विशेष प्रक्रिया आवश्यक हुनेछ। आधुनिक didactics मा, यो समस्या दुई तरिकामा हल गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा साधारण एक भिन्नता दृष्टिकोण छ। प्रत्येक विद्यार्थी संग व्यक्तिगत काम समयमा उहाँलाई अनुसार जटिलता, ध्यान र अन्य मापदण्डहरू मामलामा सामाग्री साझेदारी गर्न निमन्त्रणा छ।
दोस्रो दृष्टिकोण आफ्नै बाटो अनुसार यस अध्ययन क्षेत्रको प्रत्येक संग गठन गरिएको छ। यस मामला मा, शिक्षार्थी आफ्नै trajectory गठन गर्न निमन्त्रणा छ। यो दोस्रो विकल्प, व्यवहार मा, शायद कहिल्यै प्रयोग भने। यसले दुवै डिजाइन को प्रयोग आवश्यक र प्रत्येक जो यसको आफ्नै तरिकामा अद्वितीय छ र व्यक्तिगत क्षमता व्यक्तिगत विद्यार्थी सम्बन्धित छ विभिन्न मोडेल, लागू भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
शैक्षिक कार्यक्रम को भाग रूपमा विद्यार्थीलाई ज्ञान तिर आफ्नै व्यक्तिगत कदम पहिचान गर्न सिक्नुपर्छ। तिनीहरूले अतिरिक्त (उदाहरणका लागि, डायरी) रेकर्ड सबै किसिमका को रूप मा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यो, बारी मा, सारांश उच्च संस्कृति र योजना क्षमता को विद्यार्थी आवश्यक हुनेछ। अवलोकन यो गतिविधि कम्प्युटरमा प्रविधि प्रयोग गरेर आधुनिक विद्यार्थीहरू द्वारा एकदम सजिलै बाहिर छ भनेर देखाउँछ। यस मामला मा, काम आफ्नो भाग मा कुनै पनि अनिच्छा कारण छैन। Formalization र केही हदसम्म विस्तृत कार्यक्रम र योजना विद्यार्थीहरूको राय मा, रेखाचित्र, नक्सा, टेबल को तार्किक-जनक मोडेल प्रयोग गर्न, ठीक गर्नु मौका प्रदान गर्न र स्पष्ट जीवनमा संज्ञानात्मक रणनीति र दृष्टिकोण हेर्नुहोस्। व्यापक आज प्रयोग गरिन्छ नेविगेटर ज्ञान को दुनिया गर्न पुस्तिका एक प्रकारको छन्।
आधुनिक शिक्षा असत्यवत अवस्थामा। यो प्रक्रियाको जटिलता नयाँ प्रविधिहरू को वृद्धि गर्न विरोध छ भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन्। आफ्नो सार अनुसार बाटो कम्प्युटरमा भाषा को धारणा संग पाचन गरेर संज्ञानात्मक प्रक्रियाको सामग्री केही formalization पछि लाग्नुलाई मा हुन्छन्। जाहिर छ, यो प्रवृत्ति भविष्यमा जारी हुनेछ र शिक्षा, वा concomitant पक्ष सुधार को मुख्य निर्देशन को एक हुन सक्छ। यसैबीच, नै नेभिगेसन घटक सिर्जना झन् जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया मा विचार पक्कै सकारात्मक कुरा हो।
मानव रगत के हो? रगतमा के?
विश्लेषण Tiutchev कविता "मन रूस बुझ्न छैन।" को quatrains को अर्थ
Yeasts विभाग को Fungi छन्? खमीर: संरचना, प्रकार
कसरी यो गणना गर्न, वजन के हो र यो वजन भिन्न कसरी?
माछा को पार्श्व लाइन र व्यवहार यसको भूमिका र माछा को जीवन
खुवाउने कुर्सियां - चयन नियम
Dzhemete गाउँमा। समुद्र नजिकै मनोरञ्जन केन्द्र
"मलाई सबै भन्दा राम्रो" (मलाई को सर्वश्रेष्ठ): कथा, को भूमिकाको अभिनेताहरु। "मलाई सबै भन्दा राम्रो" - एक melodrama निकोलस स्पार्क्स गरेर उपन्यास मा आधारित